Xukuumadda oo ka hadashay hannaanka doorashooyinka, Amniga dalka xilliga doorashada iyo colaadaha ka jira gobollada Mudug iyo Shabeellada Dhexe. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Xukuumadda oo ka hadashay hannaanka doorashooyinka, Amniga dalka xilliga doorashada iyo colaadaha...
Xukuumadda oo ka hadashay hannaanka doorashooyinka, Amniga dalka xilliga doorashada iyo colaadaha ka jira gobollada Mudug iyo Shabeellada Dhexe.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Federaalka iyo Dib-u-heshiisiinta Mudane Mukhtaar Xuseen Afrax ayaa ka warbixiyey halka ay marayaan howllaha doorashooyinka, isagoo tilaamay in Xukuumaddu ay ku taagantahay fulinta qodobada heshiiskii ka soo baxay shirarkii Samareeb iyo Muqdisho, isla markaana ay wax walba oo la xiriira doorashooyinku ku qabsoomi doonaan xiligii lagu heshiiyey, wuxuuna ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in kaalintooda ay ka qaataan sidii ay nabadgelyo ugu dhici lahayd doorashadu.
Sidoo kale Wasiirka ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed ee ku dagaallamaya deegaannada hoostaga Galmudug iyo Hirshabelle in colaadda ay ku joojiyaan shuruud la’aan, isagoo tilmaamay in odayaasha dhaqanka, culimada iyo waxgaradka deegaanadaas looga baahan yahay kaalintooda ku aaddan sidii colaadda loo joojin lahaa.
Dhanka kale Wasiirka Amniga Gudaha Mudane Xasan Xundubey Jimcaale ayaa faray Ciidanka amniga in ay xoojiyaan nabadgelyada xiligan muhiimka ah ee lagu jiro doorashooyinka, wuxuuna xusay in amnigu uu yahay danguud oo muwaadin walba taabanaysa, loogana baahan yahay bulshadu in ciidanka ay gacan ku siiyaan sugidda amniga.
Previous articleBiya qabadka Warta degmada Boondheere oo buuxdhaaftay ayaa sababtay in biyuhu gudaha u galaan xaafadaha ka agdhaw+(SAWIRRO).
Next articleDibadbaxyo lagu taageerayo howlgallada Dowladda ka waddo Ismaamulka Tigreega oo ka dhacay Itoobiya+(SAWIRRO).